नेताहरुमा त्यागको भावनाको साह्रै खाँचो छ  | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / नेताहरुमा त्यागको भावनाको साह्रै खाँचो छ
नेताहरुमा त्यागको भावनाको साह्रै खाँचो छ
Posted by: युगबोध in विचार January 11, 2018	0 117 Views
हिजो दिउसो कार्टर से न्टरबाट ५ नं. प्रदे शमा अध्ययन गर्न पठाइएका दुईजना ने पाली नागरिक भाइबहिनीहरु मलाई खो जी–खो जी आएर दुई घण्टासम्म कुराकानी गरे र गए । उनीहरु छ महिनासम्म यस क्षे त्रमा बस् ने हुन् रे  । नया“ ने पाल अर्थात संघीयताको सन्दर्भमा यहा“को वस् तुस् िथतिको छ महिने अध्ययनपछि उनीहरु कार्टर से न्टरमा फर्किने छन् । आफ्नो अध्ययनको रिपो र्ट कार्टर से न्टरमा बुझाउने छन् । से न्टरले उनीहरुलाई राम्रै सुविधा दिएर यहा“ पठाएको छ । त्यति कुरासम्म उनीहरुका मुखबाट थाहा भयो  ।
कार्टर अमे रिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति हुन् । उनी पदबाट निबृत्त भएपछि कार्टर से न्टर खो ले र बसे का छन् । धे रै ले भने को सुन्छु र पढ्छु अमे रिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरु भत्ता पचाएर मात्र बस् दै नन् । उनीहरु एउटा न एउटा अभियानमा जुटे का हुन्छन् । प्राध्यापन गर्छन् या अन्य कुनै व्यवसायमा जुट्छन् । यिनै हरुमध्ये कार्टरले एउटा संस् था चलाएर बसे का छन् । उनको संगठनको जालो ने पालसम्म आइपुगे को छ । यस संस् थाले ने पालमा शायद ०६३ सालपछि काम गदैर् आएको छ । भर्खरै यस संस् थाले ने पालको निर्वाचनको पर्यवे क्षण पनि ग¥यो  ।
यसो त अमे रिका भने पछि मान्छे त्यसै पनि लो भिन्छन् । त्यसमा पनि कार्टर से न्टरको कार्यकर्ता भएर मानवअधिकारको क्षे त्रमा काम गर्न पाउनु हामी रो जगारी खो ज्ने ने पालीहरुका लागि राम्रै मौ का भयो  । उनीहरुका प्रश्न निर्वाचनसम्बन्धी, संघीयता सम्बन्धी, गणतन्त्र सम्बन्धी, प्रादे शिक राजधानी सम्बन्धी जाति र भाषा सम्बन्धी लगायत थुप्रै थिए । यस् तै कुरा को ट्याउ“दै मै ले भने का टिप्ने गथेर्  । के टिप्थे मै ले चे क गनेर् कुरा भएन । मै ले अरुले के भन्छन् भन्ने शै लीमा है न, आफ्नै अनुभवको आधारमा निजी शै लीमा कुरा गदैर् गए ।
राजतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता जस् ता शब्दहरु राजकाजस“ग सम्बन्ध राख्छन् । कुन–कुन कालखण्डमा के कस् ता शासनशै ली चले , चल्छन् र चल्लान् दे शको परिस् िथति र हाम्रो चे तनाले निर्धारण गनेर् कुरा हुन् । एक जमानामा काठमाडौ ंलाई मात्र ने पाल भन्ने चलन बसालिएको थियो  । काठमाडौ ंबाट आएको मान्छे ले ने पालबाट आएको भन्थ्यो र त्यसै मा हामी रल्ल पथ्यौर् ं । २००९ सालमा पहिलो पटक काठमाडौ ं जानु पर्दा छ दिन लागे को सम्झन्छु । वीरगञ्ज पुगे र राहदानी बनाएर मात्रै अगाडि बढे को राम्रो सम्झना छ । राजनीतिक चासो बढ्दै जा“दा प्रजातन्त्र, समाजवाद र साम्यवादका कुरा धे रै पढियो र धे रै सुनियो पनि । छनो ट गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय भएर लागियो  ।
त्यो बे ला संसार दुई धु्रवमा बा“डिएको थियो  । एकातिर रुस, चीन, पो ले ण्ड, युगो स् लाभिया, अल्वानिया, रुमानिया, बुल्गे रिया, हंगे री आदि संसारका एक तिहाई मुलुक थिए । अर्कातिर बा“की विश्व । सिद्धान्तमा एउटा कम्युनिष्ट गणतन्त्रवादी हुनु स् वाभाविक थियो  । परन्तु ने पालमा राजतन्त्र रहे को ले गणतन्त्रको कुरा गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस् तै थियो  । त्यसै ले संघर्ष र आलो चनाको भुमरीमा स् वतः परियो  । आखिर मुलुक गणतन्त्रमा आइपुग्यो  । अन्तरिम संविधानले राज्यको पुनर्संरचनासम्म भने को थियो  । खासगरी मधे शको आन्दो लनले संविधानमा संघीयता शब्द थपिन गयो  । प्रधानमन्त्री गिरिजा, प्रचण्ड र माधव ने पाल एकै ठाउ“मा थिए । यत्तिकै मा हाम्रा एघार वर्ष बिते का छन् । मधे शी जागे , थारु जागे र जागे जनजाति पनि । समष्टिमा ने पालीहरु जागा भए । उठे  । आफ्ना अधिकार खो जे  । आजको संविधानसभामा प्रदे शसभा र स् थानीय नगर एवं गाउ“पालिका सबै –सबै को प्रतिनिधित्व कायम भएको छ । यसो भए पनि कतिलाई भने यो परिवर्तन पचे को छै न । यो पद्धतिले पूर्णता पाउनु । चल्नु कहा“ छ कहा“ शंका र उपशंकाको बाढी छ । कमल थापाहरु राजतन्त्रको वकालत गदैर् उपप्रधानमन्त्रीसम्म बने का छन् भने राजा ज्ञाने न्द्र झल्याक झुलुक दे खिनासाथ एउटा समूह राजा आऊ दे श बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो दे श प्राणभन्दा प्यारो छ भने र जयजयकार गदैर् छ । त्यसले मान्छे लाई भ्रम पर्छ के हुने हो ?
यो भ्रम खडा गर्नमा हाम्रो प्रशासन पद्धति पनि सहायक भएको छ । जुग फे रिएर मात्र पनि पुग्ने रहे नछ । मानिसको मन पनि फे रिनुपदोर् रहे छ । प्रशासन यन्त्र अर्थात् कर्मचारीतन्त्र राणाकालीन मनो बृत्तिको छ । त्यसलाई युग अनुसार ढाल्न सजिलो पनि छै न । परिस् िथति बदलिए पनि मनःस् िथति नबदलिनु एउटा ठूलो व्यवधान रहे छ । त्यसलाई बदल्ने क्षमता आज सत्तामा बस् ने हरुमा हुनुपनेर् हो  । व्यवहारमा त हामी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा छौ ं । त्यसको लागि सक्षम प्रधानमन्त्री र उनको टिम हुनुपनेर् हो  । हामीकहा“ यिनै कुराको अभाव छ ।
अकोर् कुरा हामी ने पालीहरुले बहुदलीय पद्धतिलाई स् वीकार गरिसक्यौ ं । अफशो च † बहुदलीयताका असल गुणहरु फै लाउन हामीलाई मुस् िकल परिरहे छ । बरु बहुदलीयताका नकारात्मक पक्षहरु छरपष्ट दे खिएका छन् । यस् तो हुनुमा मान्छे हरुको पुरानो संस् कार दो षी छ । हामी त हुकुमी शासनबाट आएका हौ ं । हामी त सामन्ती संरचनामा पालिएका मान्छे हौ ं । अझ हाम्रो यहा“ पू“जीवादी बाहिरको सभ्यताको प्रवे श भएपछि त के भयौ ं के भयौ ं । हाम्रा सत्तामा बस् ने अगुवाहरुले नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावाद, व्यक्तिवाद, गुटवाद, चाहिने नचाहिने वाद जन्माए । त्यसै ले घूस, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सबै जन्मायो  ।
राजनीति गनेर् हरुले जनजीविकाको कहिल्यै ख्याल गरे नन् । सत्ता टिकाउनमै सारा ध्यान गयो  । कस् तो तमासा छ– सत्ता टिकाउन दे उवाजीले मन्त्रिमण्डलको संख्या साठी नघाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको परिणाम आएको यतिका दिन बितिसके  । कामचलाउ सरकारले धे रै नगर्नुपनेर् काम पनि गदैर् छ । बहुदलीय संस् कृतिअनुसार यथो े चित सल्लाह गरे र प्रदे शको अस् थायी राजधानी उहिल्यै तो किसक्नु पथ्योर्  । प्रदे शप्रमुखहरु तो किसक्नु पथ्योर्  ।
अपशो च † राजधानीका लागि जुलुस, हड्ताल र अनसन शुरु गरिन्छ । दाङमा त विचित्रै छ– यहा“ राजधानी हुने हल्लाले जग्गाको कारो वार डरलाग्दो रुपले बढे को बढ्यै छ । त्यही अनुरुप महंगी बढ्दो छ, चाहिने नचाहिने सपना बढ्दो छ । अब सरकारले पछि हटेर प्रादे शिक प्रारम्भिक काम काठमाडौ ंमै चलाउने भएको छ । तर सर्वत्र यसको आलो चना भएको छ ।
संघीयताका कुरा गनेर् , विके न्द्रिकरणका कुरा गनेर् , सिंहदरवारको अधिकार गाउ“–गाउ“मा पु¥याउने भने पनि माथि बस् ने हरुको के न्द्रिकृत बानी छुटे को छै न । दाङमा त सर्वप्रथम यो खराब मानसिकतालाई संस् कृत विश्वविद्यालयले थालनी ग¥यो  । पद दाङमा र आसन काठमाडौ ंमा । सबै प्रदे शका सांसदहरुले शपथग्रहण गनेर् भने को सुने रै हो ला, मे डिकल प्रतिष्ठान दाङका उपकुलपतिले पनि काठमाडौ ंमै कार्यालय खो लिसकिन् रे † यी सबै कुराले संघीयता अभिशाप हो कि जस् तो लाग्न थाले को छ जनतालाई । तर संघीयताबाट पछि हट्न सजिलो छै न । गाउ“पालिका र नगरपालिकाहरुले अधिकार उपभो ग गर्र्न थालिसके । पछि हट्नुपर्दा अकोर् थाम्न नसिकने उथुलपुथल हुनसक्छ ।
अकोर् एउटा तर्क गरिदै छ, यो मुलुकले संघीयताको खर्चै धान्न सक्दै न । सयौ ं सयौ ं वर्षसम्म यो मुलुकले राजतन्त्रको खर्च धान्न सक्यो भने लो कगणतन्त्रको खर्च धान्न सक्दै न भन्नु बे इमानी हुन्छ । बरु परिचालन ठीकढंगले गर्न जान्नुप¥यो  । लो डसे डिङ १० वर्षसम्म नियन्त्रणमा आउन्न भन्ने हरु छ“दै छन् । एकै वर्षमा लो डसे डिङ समाप्त भयो  । ने ताहरु खासगरी प्रधानमन्त्री चो खो हुने हो भने भ्रष्टाचारबाट जो गिएकै रकमले मात्रै पनि प्रादे शिक सरकारहरु चलाउन ठूलो सघाउ पुग्छ । कार्यकर्ताहरुलाई बा“ड्ने रकम र आफ्नो उपचार आफै गराउन सक्ने सम्पन्न ने ताहरुले पाउने रकम बचत गनेर् हो भने करो डौ ं रुपै या जम्मा हुन्छ । भन्सार छल्न नदिने हो भने करो डौ ं करो ड जम्मा हुनसक्छ । अकोर् उत्तम विकल्प छ मितव्ययिता । किन हाम्रा अगुवाहरुले करो डौ ंका गाडी चढ्नुप¥यो ? तिनीहरुलाई भव्य महल किन चाहियो ? तिनीहरु किन विलासी जीवनमा रमाउने ?
अस् ित हो , वरिष्ठ पत्रकार हस् त गुरुङको ले ख पढ्दै थिए“ । जापानको उदाहरण पढे र साह्रै घत लाग्यो  । उहा“ ले ख्नुहुन्छ– दो स्रो विश्वयुद्धले तहसनहस भएपछि जापानले नागरिक खानपानको एउटा विशे ष नियम बनाएको थियो  । जो बुद्धको व्यावहारिक शिक्षाबाट झिकिएको थियो  । जस् तो प्रत्ये क नागरिकले बुद्धको दानपात्रमा खाना खाने  । जसमा तीन गास खाना अटाउ“छ, जो वयस् क मानिसको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्यसपछि एक कचौ रा नूनिलो सुप (झो ल) खाने  । अर्थात् सबभन्दा पहिले खानामा बचत गनेर्  । खर्चको के सीमा ? उसै पत्रिकामा अकोर् ले ख पढे ं– बझाङ जिल्लामा मात्रै वर्षको २० करो डको मदिरा तिब्बतबाट, ८० करो डको मदिरा अन्यत्रबाट आयात । अबै ध लो कल मदिरा छुट्ट छ ।
गतिलो सरकारले आ“ट्यो भने यस् ता हानिकारक खानपान र रहनसहनको स् तर घटाउन सक्छ । त्यो बे लामा कार्टर से न्टर जस् ता अन्तर्राष्ट्रिय संस् थाहरुको ने पालीहरुलाई खा“चो नै पदैर् न । अन्यथा पुराना अने क शासन प्रणाली फे ल भएझै ं संघीयता पनि फे ल हुन्छ । पुरानै चाला हो भने पुरानै परिपाटीमा फर्किन कति बे र ? त्यो पुरानो को नया“ स् वरुप लो कतन्त्रकै विरुद्ध हुन्छ हुन्छ । अनि त नरहे बा“स न बजे बासुरी के जापानीहरुमा जस् तो त्याग र मितव्ययिताको भावना ने पाली ने ताहरुमा आउन सक्छ ?
Previous: सरकार, डा. केसीलाई जेल कोच्दे ! टन्टै साफ
Next: विदे श छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा
दशैं पर्व २०७५ को शुभकामना
बोक्सीको आरोप लगाउनु अपराध हो
प्रकृति र हाम्रो सोच